သတင်း - အကောင်းဆုံး squash လေ့ကျင့်ရေးစက် S336 siboasi အမှတ်တံဆိပ်
အကောင်းဆုံး squash လေ့ကျင့်ရေးစက် S336 siboasi အမှတ်တံဆိပ်
Squash သည် တံတိုင်းဖြင့် ကာထားသော တရားရုံးရှိ အချို့သော စည်းကမ်းများနှင့်အညီ နံရံပေါ်မှ ပြန်ပြန်ဘောလုံးကို ပြိုင်ဘက်က တံတိုင်းနှင့် ထိသည့် အပြိုင်အဆိုင် အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Squash ကို ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းတွင် လန်ဒန်အကျဉ်းထောင်ရှိ အကျဉ်းသားများက တီထွင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး ထောင်ရဲ့အငွေ့အသက်ကို ထိန်းညှိဖို့ နံရံကို တံတိုင်းနဲ့ထိလိုက်ပါ။
20 ရာစုတွင် squash သည် တွင်ကျယ်စွာ ရေပန်းစားလာခဲ့ပြီး နည်းစနစ်များနှင့် နည်းဗျူဟာများကိုလည်း ဆန်းသစ်တီထွင်ခဲ့သည်။1998 ခုနှစ်တွင် squash ကို ဘန်ကောက်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၏ တရားဝင်ပွဲအဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။Squash ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ squash ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် 1967 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော World Squash Federation ဖြစ်သည်။
အဘယ်နည်းsquash ဘောလုံးပစ်ခတ်မှုစက် ?
ဟိsquash ဘောလုံးစက်ပစ်လွှတ်ရန် squash ဘောလုံးကို ညှစ်ရန် သေနတ်ပစ်ဘီးနှစ်ချောင်းကို အားကိုးသည်။လူသိများတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ပါ။squash ဘောလုံးပစ်လွှတ်စက်"Siboasi" ဟုခေါ်သည်။ဟိSiboasi squash လေ့ကျင့်ရေးစက်စကက်ရှ်ဘောလုံးများကို သေနတ်ပစ်ဘီးနှစ်ခုသို့ ဖြန့်ဝေပေးသည့် လှည့်စားပွဲတစ်ခုရှိသည်။မော်တာသည် လျင်မြန်စွာ လှည့်ခြင်းဖြင့် ဘောလုံးများကို ပစ်လွှတ်ရန် သေနတ်ပစ်ဘီးနှစ်ခုကို မောင်းနှင်ပေးသည်။
လူကြိုက်များသည်။S336 siboasi squash နို့တိုက်ကျွေးသောဘောလုံးစက် :
1. AC (လျှပ်စစ်) နှင့် DC (ဘက်ထရီ) နှစ်မျိုးလုံး အဆင်ပြေပါသည်။
2. သယ်ယူရလွယ်ကူပြီး 21 Kgs အတွင်းသာ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပါသည်။
3. ရွေ့လျားနေသောဘီးများဖြင့် တရားရုံးအတွင်း လွယ်ကူစွာ ရွေ့လျားပါ။
4. squash ball 80 ကိုင်နိုင်သည် ;
5. စမတ်အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ;
6. Lithium အားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီ : လျှပ်စစ်ပါဝါမရှိသော်လည်း အားအပြည့်သွင်းလျှင် အချိန်မရွေးဖွင့်နိုင်သည်။
7. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်များအားလုံးတွေ့ဆုံရန် 110-240V မှ မတူညီသောလိုအပ်သောပလပ်များပါရှိသော၊
8. အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ : ချိန်ညှိနိုင်သော အမြန်နှုန်းနှင့် ကြိမ်နှုန်း၊ ထောင့် စသည်တို့။မတူညီသော လေ့ကျင့်ရေးပုံစံများသို့ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ချခြင်း၊ကျပန်းဘောလုံး၊ ပုံသေအမှတ်ဘောလုံး၊ မျဉ်းဖြတ်ဘောလုံး၊ topspin၊ နောက်ပြန်လှည့်ခြင်း။
Siboasi S336 squash သေနတ်ပစ်စက်၏သတ်မှတ်ချက်များ
ပစ္စည်းနံပါတ်- Siboasi S336 Squash ဘောလုံးအစာကျွေးစက် ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား 41.5CM *32CM*61CM
အကြိမ်ရေ- ဘောလုံးတစ်လုံးလျှင် 2-7 S မှ စက်အသားတင်အလေးချိန် 21 ကီလိုဂရမ် - အလွန်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု Siboasi After-sales team ကိုဖြေရှင်းပြီးသည်အထိလိုက်နာပါ။ ဘောလုံးစွမ်းရည်- ဘောလုံးအလုံး 80 ကိုင်နိုင်သည်။
ပါဝါ (လျှပ်စစ်): 110V-240V AC POWER အာမခံချက်-2နှစ် Warranty ပေးပါသည်။ကွပ်ပစ်ပစ်စက်
အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများ- အဝေးထိန်းကိရိယာ၊ အားသွင်းကြိုး၊ ပါဝါကြိုး၊ ဘက်ထရီ စုစုပေါင်းအလေးချိန်ထုပ်ပိုးခြင်း။ 31 KGS - ထုပ်ပိုးပြီးနောက်
အားသွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ- ၃ နာရီခန့်ကြာသည်။ ထုပ်ပိုးမှု တိုင်းတာခြင်း- 53*45*75cm (သစ်သားဘားဖြင့် ထုပ်ပိုးပြီးနောက်)
တင်ချိန်- ဧပြီလ ၂၁-၂၀၂၂